तामाङ भरिया बन्नलाई जन्मिएको हो ?
Created on Friday, 26 August 2011 04:28
पिपा गोश्वारा तामाङहरुका लागि कलंक हो । सम्झौतापछि सरकारले यसको नाम मात्रै परिवर्तन गरेको छ । काम भरियकाको गर्नुपर्छ र तलब पनि अरुले पाउने भन्दा आधा पाउँछ । मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदिको जातीय गण हुन्छ भने तामाङ गण नहुने कारण के हो ? के तामाङ भारी बोक्न जन्मिएको हो ?
प्रमुख राजनीतिक दलहरुको गैर जिम्मेवारीपूर्ण कार्यले गर्दा देश दिनानुदिन बर्बादी र गम्भिर संकटतर्फ धकेलिएको छ । जातीय, बर्गीय, लिङ्गीय क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्यार्थ अग्रगामी राज्यपुनःसंरचना र सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको बलमा गठन भएको संविधानसभाको दोश्रो पल्ट थपिएको ३ महिनाको म्याद पनि भित्र पनि दहरुको असक्षमता र अकर्मण्यताले गर्दा संविधानको मस्यौदा तयार हुन सकने । शान्ति र संविधान निर्माणमा दलहरु इमान्दार र प्रतिबद्ध देखिएन । संविधान सभालाई असफल बनाउने प्रयत्न भएको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा जनादेश प्राप्त गरी संविधानसभामा पुगेका केही दलका नेताहरु जनादेशका विरुद्ध बोल्न थालेका छन् । नयाँ संविधान बनाउन नचाहनॆ २०४७ को संविधान ब्यूँताउने तथा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताविरोधी प्रतिगमनकारीहरु सकि्रय हुन थालेका छन् । अहिले अन्तरिम संविधानको भावना र २०६२\_६३को जनआन्दोलनद्वारा स्थापित सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र जातीय-क्षेत्रीय स्वशासन तथा स्वायत्तता र अग्रगामी राज्यको पुनस्रंरचनाको एजेण्डा धरापमा पर्दै गएका छन् ।
नेपाली राजनीति र भूमिमा विदेशी शक्तिहरु नाङ्गो नाँच्न थालेका छन् । प्रमुख दलहरु संविधान र शान्तिको लागि होईन कि मुलुकलाई सधै संक्रमणकालमा राखेर संविधानसभाको अवधिलाई सरकार ढाल्ने र आफनो नेतृत्वमा सरकार वनाउने खाल बनाएर दाउमा जुवा खेलीरहेका छन् । सभासद्हरु निरीह र प्राण शुन्य भएका छन् । के दुई वर्षका लागि जनताबाट निर्बाचित व्यवस्थापिका संसद संविधानसभाले अनन्तकालसम्म आफनो म्याद आफै थप्नसक्ने हैसियत राख्छ ? संविधानसभाको थपिएको ३ वर्ष ३ महिनामा २ वर्ष ३ महिना संविधानको एक अक्षर नलेखी म्याद मात्र थप्ने सहमति गरिरहनु कुन् राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दछ ? आफैले बनाएको अन्तरिम संविधान आफैले कति च्यात्ने हामी संविधानसभाबाटै संविधान बन्नु पर्दछ भन्ने दृढ मान्यता राख्छौं अपितु तोकिएको समयमा इमान्दारीसाथ संविधान नबनाउने र अनन्तकालसम्म संविधानसभाको म्याद मात्र थप्ने संक्रमणकाल लम्व्याई देशलाई सधै अस्तव्यस्त र बन्धक बनाइराख्ने र २०४७ को संविधान फर्काउने बाताबरण तयार गर्ने प्रबृत्ति यो सार्वभौम नेपाल र नेपाली जनताका लागि धोका हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । हामी यसतो अनैतिक राजनीति, अराजनीतिक प्रवृत्ति र प्रतिगमनकारीहरुको जोडदार विरोध र भत्सर्ना गर्दछौं ।
तामाङ्ग र ताम्सालीङको सम्बन्धमा
सरकारले विगतमा ताम्सालीङ संयुक्त संघर्ष समितिलगायत विभिन्न आदिवासी\_जनजाति, मधेसी, तराइबासी, थारु, राजनीतिक दल\_संघ\_संस्थासंग गरेको सम्झौतालाई कति पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । २०६५ चैत गते संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको ताम्सालीङ रिङ रोड, नमूना विकास कार्यक्रमको बजेट छुट्ट्याएको छैन र नेपाली सेनामा तामाङ गण बनाउने सम्झौता कार्यान्वयन पनि गरेको छैन । पिपा गोश्वारा खारेज गरेर तामाङ गण बनाएको छैन । पिपा गोश्वारा तामाङहरुका लागि कलंक हो । सम्झौतापछि सरकारले यसको नाम मात्रै परिवर्तन गरेर बन्दोबस्ती गण बनाइएको छ । हामी खोजेको त्यहाँ कार्यरत ५०० तामाङलाई अन्य सुरक्षाकर्मी सरहको अधिकार हो । पिपामा भर्ती हुनु भनेको सिपाही बन्नु होइन । उनीहरुलाई भरिया बनाइएको छ । तलब पनि अरुले पाउने भन्दा आधा मात्रै हुन्छ । यसलाई बन्दोवस्ती गण होइन त्यसलाई तामाङ गण बनाउनु पर्दछ ।
मगर, गुरुङ्ग, राई, लिम्बु आदिको जातीय गण हुन्छ भने तामाङ नहुने कारण के हो ? सुरक्षा निकायमा भर्ती भएकालाई समेत भारिया बनाइएको छ । ते तामाङ भारी बोक्न जन्मिएको हो ?
राणाकालमा तामाङ्गलाई सरकारी सेवामा लिइएन र विदेशमा नोकरीका लागि जान पनि दिइएन । सिँहदरबारमा बन्दा उनीहरु तल्लो तहको मजदुरको रुपमा काम गर्न बाध्य भए । तर यो मुलुक गणतान्त्रिक भईसक्दा पनि यस्तो जातीय विभेद किन हटेको छैन ।
अझै दुख लाग्दो कुरा त के छ भने त्यस विषयमा संविधानसभामा कुनै पनि सभासदले आवाज उठाएका छैनन । गाई खाएको झूठो मुद्दामा तामाङ, मगर आदि आदिवासी\_जनजातिलाई विगतदेखि फसाई जेल तथा प्रहरी हिरसातमा बन्दी बनाई दुःख दिइरहेको स्थितिमा पुरानो ऐनको व्यवस्था खारेज गर्नुको सट्टा झलनाथ खनालको सरकारले पंचायती शैलीको गाईगोरुको तथाकथित पवित्रता प्रमाणित गर्न्र ३ वर्ष कैद र रु. ५०,००० सम्म दन्ड गर्ने विधेयक ल्याएर धार्मिक स्वतन्त्रता ,सांस्कृतिक स्वतन्त्रता, धर्मनिरपेक्षता विश्वव्यापी मानव अधिकारको घोषणापत्र र आदिवासी जनजातिको मानव अधिकारको खिल्ली उडाएको छ ।
सांस्कृतिक पर्यावरणीय र भौगोलिक विविधतापूर्ण देशमा एउटा जातिको दौरा सुरुवाललाई राष्ट्रिय पोसाक बनाउने पंचायती नीति फर्काइदैछ । सरकारको अस्थीरताको फाइदा उठाएर मुल्यबृद्धि र कालोबजारियाको दवदवा बढेको छ । आम गरिव जनताको गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाको ग्यारेन्टीतर्फ सरकार उदासिन छ । सत्तासीन दलहरु कै संरक्षणमा पत्रकार तथा सर्वसाधरण जनतामाथि कुटपिट र गुन्डागर्दी गर्नु सामान्य कुरा भएको छ । शान्ति व्यवस्था र जनताको ज्यान धनको कहीँ सुरक्षा छैन ।
राज्यका सबै संरचनालाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनुका लागि पिछडिएका आदिवासी\_जनजाति, दलित महिलाका लागि आरक्षण गर्ने कानुन छैन र कतिपय सरकारी संस्थाले आरक्षणको कोटा कटाएका छन् । मुलुक विदेशी कलकारखानाका लागि कामदार उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जामा परिणत भएको छ । व्यापार घाटा बढ्रनु र भुक्तानी सन्तुलन विग्रनुको स्थितिले रेमिट्यान्स नआउने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टनेतर्फ घचेटिएको छ ।
ठूला दलको सत्तामोहले सरकार सधै अस्थीर राजनीतिक पदमा र बजेटमा दलीय भागबन्डा र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीयकरणले सत्ताधारी दलको संरक्षण र प्रोत्साहनमा देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यी सब समयमा शान्ति प्रकि्रया नटुंिगनु र संविधान नबन्नुको कारण र परिणाम हुन् भन्ने कुरामा कसैको दुइमत हुनसक्दैन । अतः हाम्रो दलले हामीहरुसंग सरकारले गरेको सहमतिहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गराउन र धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र र जाति भाषा र ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशलगायत समानुपातिक र समावेशीतालाई सुनिश्चित गरिएको अग्रगामी संविधान तोकिएको समयमै निर्माण गराउन व्यापक दबाव सिर्जना गर्न भाद्र ११ गते काठमाडौं उपत्यकासहित ताम्सालीङ क्षेत्र (पश्चिममा बुढी गण्डकी-नारायणी नदीदेखि पूर्व, पूर्वमा कमला नदीदेखि पश्चिम, उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानादेखि दक्षिण र दक्षिणमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तर तथा सोसंग अविछिन्न रुपमा जोडिएको तामाङ बाहुल्य क्षेत्र)मा शान्तिपूर्ण बन्द लगायतका कार्यक्रम अघि सारेका हौं ।
राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार पारेको १४ प्रदेशलाई संशोधन सहित पारित गर्नुपर्दछ । सुनकोशी र नारायणी पद्रदेश खारेज गर्नु पर्दछ । काँग्रेसले भन्ने गरेको सात प्रदेश प्रति ताम्सालीङ दलको कडा आपत्ति छ । हामी अखडित ताम्सालीङ् प्रदेश टुकि्रएको हेर्न सक्दैनौं ।
भदौ १४ गते ३ जना मान्छेले पौने ३ करोड नेपाली जनताको भाग्य फैसला गर्ने छ । जनता भन्नुहोस् तपाईको नेतालाई नयाँ नेपालको नयाँ संविधान चाहियो । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र हाम्रो शान्ति खोस्ने; अन्नतसम्म संविधान सभाको म्याद थप्नॆ; जातीय स्वशासन र सङ्घीयताविनाको मस्यौदा संविधान सार्वजनिक गर्ने; वा संविधानसभाको थपिएकोसमेत ३ बर्षे म्याद समाप्त भएपछि राज्यपुनःसंरचना आयोग बनाउने खेलमा संविधान बन्न नदिने वा २०४७ सालको संविधान ब्यूँताउने; अव हामीलाई कुनै प्रकारको बहाना मंजुर छैन । धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्र आत्मनिर्णय स्वशासन र स्वायत्तता हाम्रो अधिकार हो । ऐतिहासिक थातथलोको आधारमा अखन्डित ताम्सालीङ हाम्रो अधिकार हो । याद गर्नुहोस् ! अझै तपाइँ आन्दोलनमा सहभागी हुन इन्कार गर्नुहुन्छ भने तपाइँ आफूभन्दा खराव र असक्षम मान्छेबाट शासित हुने सजायको भागी हुनुहन्छ ! सार्वभौम नेपालको सार्वभौम जनता आफनो सार्वभौम शक्तिको रक्षा गर्न हामी आन्दोलित भएका हौं ।
मुलुक हामी सबैको हो । ठूला दलका नेताहरुलाई हाम्रो आग्रह छ - ०६८ जेष्ठ १४ गतॆ गरेको तिम्रो प्रतिज्ञा पूरा गर ! कि संविधान देऊ कि निकास देऊ ! बन्दी संविधान सभालाई मुक्त गर ! सरकारलाई सचेत गराउँछौं - हाम्रो भावनाअनुसारको संविधान र हाम्रो माग पूरा नभएमा हामी उच्चस्तरको सशक्त आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने छौं ।
(लेखक ताम्सालिङ- नेपाल राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव हुन)